PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-20 - IBHAQO LOKUBHAQA
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-20 - IZIMVO - - Sonwabile Mfecane, eMonti
UMNUMZANA uMakuliwe ubhale into kweliphepha le-29 kweyeNkanga ukuya kwi-05 kule yoMnga esihloko sithi ‘IsiNgesi samaMelika’.
Ndifuna nje ukuphawula kule ndawo anyathele kuyo xa etshayelela le ngxelo yolwimi.
Uthi iMelika yabhaqwa nguChristopher Columbus. Ndinayo indawana yokuthemba ukuba le nto ndizakuthetha ngayo lo kaMakuliwe uyayazi koko ebesala ukuphuma kumxholo wakhe wolwimi.
Likhona ibatha ekubhalweni kweembali zabantu amazwe abo aye athatyathwa afakwa phantsi kobukoloniyali.
UColumbus wahamba engumhlolilizwe njengokuba esitsho uMnu. Makuliwe kodwa akukho bunyani kule yokubhaqa.
Ufike kukho abantu abangabemmi bemveli kule ndawo uColumbus kodwa nje ngokuba iYurophu yazimisela ukusingela phantsi bonke abantu abangafaniyo nabo zange babhale nto ngabemmi bemveli, ukusuka apho bazingomba izifuba bezigwagwisa ngoku kubhaqa.
IMelika inabantu abaziwa ngokuba ziiNative Americans (Okanye iiRed Indians). Ngaba bantu ooColumbus aba bazenza amaqhawe ngoku”bhaqa” ilizwe labo, bekhona phofu. Omnye umzekelo kukubhalwa “ngebhaqo” likaDavid Livingstone lokubhaqa iingxangxasi iVictoria Falls kwindawo nayo eyathiywa ngaye kwilizwe iZambia.
Le ndawo ikuyo iLivingstone neengxangxasi zabakho kwindawo ezikuzo ngexesha ekwadalwa ngalo umhlaba, uDavid Livingstone lo engekazalwa nabantu bakhe beYurophu bengekakwazi nokwenza ezo nqanawa zokuza kwezi ndawo bathi bazibhaqile bona.
Aba bakhenkethi okanye bahlolimazwe belizwekazi iYurophu babhale izinto ezininzi ngazo belungiselela ukuba baziwe njengamagorha.
Impazamo abaziphawule kade ukuba bayenzile kukulibala ukuxoka kwangoko bathi bafika kwezinye iindawo kungekho mntu.
Bafika kungekho mntu ukwaziyo ukubhala, nto leyo ethi bafika kungekho mbali ibhaliweyo, kodwa bafika imbali isaziwa.
Le mbali ihluzwayo yeyokuba imihlaba ngokubanga ukuba kwafikwa ingemiwanga, yabhaqwa ke lilonke. UChristopher Columbus noDavid Livingstone, nabanye basasaza ubuxoki, zange babhaqe nto apha.
ULeon de Kock ubuza umbuzo oyinene othi bathi bakufika baphosa amehlo endaweni kwahluma iingxangxasi na? Abantu baseZambia umzekelo babezazi ezingxangxasi bezibiza ngokuba yiMosioatunya (Thundering Smoke).